Nke a dị n'otu n'ime ọtụtụ nkwekọrịta ndị isi ọchịchị steeti ahụ mere na nzukọ ha nwere ụbọchị Tuzdee n'obi gọọmenti dị n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ, ma bụrụkwa nke ha kwuru na ebumnobi ya bụ iji bèlata arụrụ ala na omekome n'ebe ahụ.
Dịka ode akwụkwọ mgbasa ozi nyere gọvanọ Willie Obianọ, bụ maazị James Eze siri kwuo, e kwekọrịtakwara ma ma na-enye ndị niile rụnyesiri ụlọ, ọdụ ahịa na ihe ndị ọzọ n'ụsọ ohimiri Naịja ka ha kwakọrọ ngwo ngwo ha pụọ tupuu ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọgọstụ ahọ a n'ihi na a ga-akụgwosi ebe niile ahụ oge adịghị anya. O kwuru na ohere ahụ a na-enye ndị ahụ bụ ka ha wee nwee ike ịchọta ihe ọzọ ha ga na-eme ma ọ bụ ebe ọzọ ha ga akwaje, tupuu ụbọchị ahụ eruo.
N'okwu dịkwa ka ibe ya, aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ jiri ohere ahụ wee too ụlọ ọrụ niile jikọrọ aka ọnụ wee na-akụtùsị ọdụ ahịa na ihe ndị ọzọ ahụ dịgasị ebe na-ekwesighị ekwesi na steeti ahụ, ma rịọ ha ka ha jisie ike gaa n'ihu n'ime nke ahụ wee ruo mgbe mma steeti ahụ pụtara ihè. Ọ dọkwara ndị na-awụsa ahịhịa n'ebe ekwesighị ekwesi na steeti ahụ aka na ntị ka ha sepụ aka na nke ahụ n'ihi na onye ọbụla e nwetere na nke ahụ ga-abụ onye a ga-eji iwu wee nyụchaa anya.
N'aka nke ọzọ, gọvanọ katọkwara otu ụfọdụ ndị si agànye aka n'ala gọọmenti n'ebe dị iche iche na steeti ahụ, ma kwuo na onye ọbụla a ga-enweta n'agwa ọjọọ ahụ ga-eji anya ya wee hụ ntị ya, na-ejighị ènyò.